ग्राहकहरू तपाइँलाई सोशल मिडियामा पुग्न प्रयास गर्दैछन्, तपाइँ त्यहाँ हुनुहुन्छ? | Martech Zone
ग्राहकहरू तपाइँलाई सोशल मिडियामा पुग्न प्रयास गर्दैछन्, तपाइँ त्यहाँ हुनुहुन्छ?
सोमबार, नोभेम्बर 3, 2014 Douglas Karr
एक व्यापार को लागी सामाजिक मिडिया मा उपभोक्ताहरु द्वारा बनाईएको प्रत्येक requests अनुरोधहरु मध्ये अनुत्तरित जानुहोस्। व्यवसायहरूले सञ्चार माध्यमको रूपमा यसको प्रभाव पहिचान गर्नुको सट्टा प्रसारण माध्यमको रूपमा सामाजिक मिडिया प्रयोगको भयानक गल्ती गर्न जारी राख्छ। धेरै पहिले, कम्पनीहरूले इनबाउन्ड कल प्रबन्धनको महत्त्वलाई मान्यता दिएका थिए किनकि ग्राहकको सन्तुष्टि सीधा धारणा र ग्राहक मूल्यमा बृद्धि भएको हो।
को मात्रा सामाजिक मिडिया अनुरोधहरु 77 XNUMX% बढेको छ वर्षौं बर्ष। तर प्रतिक्रिया केवल व्यवसायले गरेको%% मात्र बढेको छ। त्यो ठूलो अन्तर हो! किन सामाजिक अनुरोधहरू उस्तै ध्यान पाइरहेका छैनन्? मेरो अनुमान के छ कि उपभोक्ताहरूले फोन मार्फत प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्दैनन् त्यसैले तिनीहरू जवाफमा नभएको कलमा बसिरहेको बेला उनीहरू झै निराश हुँदैनन्। तर व्यवसाय को लागी अवसर वास्तवमा सामाजिक प्रभाव बनाउन धेरै उद्योगहरूमा ठूलो छ ... विशेष गरी यो जानेर कि तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरू उत्तरदायी छैनन्!
बितेको बर्षमा ब्रान्ड र ग्राहकहरू बीचको सोशल मिडिया कुराकानीमा केहि आश्चर्यजनक प्रवृत्तिहरू देखा पर्‍यो। सामाजिक व्यवसाय दुबै समग्र र उद्योग विशेष प्रवृतिको एक छिटो सिंहावलोकन प्रस्ताव गर्दछ।
यो Sprout सामाजिक सूचकांक स्प्राउट सोशल द्वारा संकलित र जारी गरिएको एक रिपोर्ट हो। सबै सन्दर्भ डाटा १,,०18,057 सार्वजनिक सामाजिक प्रोफाइल (,, १०० फेसबुक;,,। 9,106 Twitter ट्विटर) Q8,951 २०१ and र Q1 २०१ between बीच लगातार सक्रिय खाताहरूको आधारमा छ। त्यस समयमा पठाइएको १ 2013० लाख भन्दा बढी सन्देशहरू यस रिपोर्टको उद्देश्यका लागि विश्लेषण गरिएको थियो।
टैग: सामाजिक श्रवणसामाजिक श्रवण तथ्या .्कसामाजिक मिडिया अनुरोधहरूसामाजिक अंकुरअंकित सामाजिक सूचकांक
खातामा आधारित B2B मार्केटिंग के हो?